आज ऋषि पञ्चमी पर्व यसरी मनाइँदैछ, यस्तो छ ऋषि पञ्चमीको महत्व - Experience Best News from Nepal
आज ऋषि पञ्चमी पर्व यसरी मनाइँदैछ, यस्तो छ ऋषि पञ्चमीको महत्व
भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने ऋषि पञ्चमी आज नेपाली नारीहरूले सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन् । महिलाले आज बिहानै उठेर नजिकको नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गई ३६५ दत्तिवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाई स्नान गर्ने गर्दछन् । रजस्वलाका समयमा छाइछुइलगायत कुनै त्रुटि भए आज ऋषि पञ्चमीको दिन अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गर्नाले मुक्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास छ ।
सर्वाधिक ‘सेक्स’ खोज्नेमा नेपाल चौथो नम्बरमा ! जान्नुहोस् किन देश कति नम्बरमा
छोटो लिंग यसरी तन्काउनुस !!
यी २० तत्व देख्नुभयो !! थाह पाउनुहोस तपाइको जीवन बदलिदै छ !!
यी ६ कुरा जसले मान्छेलाई बनाउछ भाग्यमानी, तपाईसँग छ कि छैन ?
आफ्नो औँलाको नङ हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् , तपाँइ कति बुद्धिमान र धनवान बन्नुहुनेछ !
प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीलाई देखाउछन् यी ४ नखरा !! बच्ने कि?